Na afọ nbudata, importing na exporting media faịlụ gị iTunes n'ọbá akwụkwọ na-abịa nro nke ihicha ma na-ahazi ọtụtụ narị gigabytes na ụdị data dị ka mma. The odious ọrụ nke gwara gị esetị n'ọbá akwụkwọ na-aghọ onye Uphill agha. Otu akụkụ nke jupụtara music n'anya Apple ngwaọrụ ọrụ bụ bedraggled iTunes n'ọbá akwụkwọ na hesitance ọcha ya. A na-eme n'ihi na enweghị kwesịrị ekwesị paraphernalia, mgbalị gị ịhazi iTunes n'ọbá akwụkwọ na-aga na efu.
Part I. The Common oj oo ezie Fixing na Library
• The metadata ọmụma nke ọdịyo faịlụ enyere iTunes na cataloging ya. Ebe ọ bụ na e nwere otutu isi mmalite site na nke egwu na-dị ka gị Ọbá akwụkwọ, izi ezi nke metadata-aghọ nebulous. Tweaking a oke ntupu nke untangled metadata bu isi nsogbu na-ihu mgbe gwara n'ọbá akwụkwọ.
• The oyiri tracks na ogide ngwaọrụ gị ebe nchekwa bụ ihe ọzọ na nke nke nke a nnukwu iTunes n'ọbá akwụkwọ. Ihichapụ ndị a tracks aka nwere ike na-awa.
• Ke taa dịruru ná njọ, gị, dị ka onye ọ bụla ọzọ, ga-achọ ka anya welie ahụmahụ nke na-ege ntị music. A na-emezu site mara mma album cover nkà. Ọtụtụ a ugboro cover nkà na-efu gị tracks / album. Ọ bụ ike iji aka chọọ ihe kwesịrị ekwesị mkpuchite na fanye ha na gị tracks.
• The ID3 mkpado egwu na-emekarị na-efu, ma ọ bụ na-ekwesịghị ịdị ọmụma ịtinye na ha. Tweaking ndị a na mkpado aka nwere ike ịbụ a aka usoro ruru eru nke ụbụrụ mmadụ na-echeta dum ọmụma niile tracks ugbu a na gị iTunes n'ọbá akwụkwọ.
Kasị nkịtị obibia idozi niile kwuru mbipụta bụ ntuziaka orchestration nke na usoro egwu niile na gị iTunes n'ọbá akwụkwọ na enyemaka nke na-ahazi nhọrọ na-nye site na iTunes onwe ya. Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ ọghọm nke usoro a: • Nke a bụ a na-ewe oge na implacably-agwụ ike usoro. • Ị na-achọrọ chọọ na-efu cover nkà online aka ma ọ bụrụ na ị chọrọ tinye ha albums ma ọ bụ onye egwu .. • Mgbe ụfọdụ iTunes emeso onye ọ bụla egwu nke a chịkọtara dị ka iche iche album, na nke a-ekposa ekposa na egwu ofụri album ele. Idozi nke a nke aka pụrụ isi ike ma tedious. • Ị nwere ike ida si na mkpa data gị ọbá akwụkwọ mgbe ụfọdụ n'ihi na n'oge na akpaaka-synching, iTunes deletes eleghara faịlụ-akpaghị aka.
Part II. Olee otú Idozi Tag Information, Wepụ oyiri egwu, Idozi-efu Album ekpuchi
Ga-azọpụta site ruthlessly enervating usoro nke gwara gị iTunes n'ọbá akwụkwọ, ị pụrụ iji a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ na-eme legwork maka gị. Otu nke kasị mma software ngwa dị rue-ụbọchị bụ TunesGo na bụ ihe ukara music Ọhazi mepụtara Wondershare. Ị nwere ike mfe jikwaa gị ọbá akwụkwọ na ndị ọzọ na data echekwara na gị iDevice-eji nke a usoro. Wondershare TunesGo bụ ihe na-atọ ngwá ọrụ na a ike set nke atụmatụ na pụrụ ibelata ihe mgbu nke gwara gị gigantic iTunes n'ọbá akwụkwọ. E wezụga na-ahazi gị ọbá akwụkwọ, usoro ihe omume nwere ọtụtụ ndị ọzọ dị ịrịba ama atụmatụ nke na-agụnye ebufe data n'etiti gị Apple ngwaọrụ-enweghị na-azọpụta ya na gị na laptọọpụ PC.
Ọ bụ ezie na Wondershare TunesGo bụ a na-akwụ ụgwọ ngwa, Ọmarịcha na nnukwu atụmatụ ya nwere ka ọ ruru ajụ price. The software dị maka iOS, Mac OS X, na Windows ọrụ.
Wondershare TunesGo bụ ọkachamara Apple njikwa ngwaọrụ. Ozugbo ị wụnye na ẹkedori ngwa, ọ na-akpaghị aka syncs na iTunes na--eji arụnyere na ngwaọrụ gị. Mgbe synching na iTunes, TunesGo egosiputa ọdịnaya nke gị ọbá akwụkwọ ke akpan window.
Idozi gị Tag Ozi
Ẹkedori Wondershare TunesGo.
Pịa Gbanwee na iTunes Ikwunye-na button si n'elu-nri akuku nke interface na-ebute iTunes na akpaaka-mmekọrịta ma ndị omume.
Cheta: Ị ga-aka pịa Gbanwee na iTunes Ikwunye-na bọtịnụ maka iTunes mmekọrịta mgbe ọ bụla ị malite Wondershare TunesGo. Otú ọ dị Wondershare TunesGo na-akpaghị aka oru mgbe ọ bụla ị initialize iTunes.
Ozugbo mere, họrọ Music nhọrọ n'okpuru Library Atiya site n'aka ekpe ebi ndụ nke interface.
Dị ka ndepụta nke tracks gị ọbá akwụkwọ na-egosi, họrọ Jikwaa Music Library nhọrọ si Wondershare TunesGo panel na Pop elu na nri.
Pịa Hichaa iTunes Library nhọrọ si gbasaa Jikwaa Music Library nhọrọ.
Pịa n'Ụzọ na-efu music mkpado nhọrọ si ọzọ nhọrọ ndị na-egosi maka ezi-na-n'iji ya gee ntị.
Ozugbo ndepụta nke tracks na etịbe mkpado egosi na popup window, pịa Idozi button si n'elu-nri akuku. Rịba ama: Mgbe ị na-eme otú ahụ, TunesGo na-akpaghị aka fixes niile efu na-ekwesịghị ịdị na mkpado ọmụma nke tracks gị n'ọbá akwụkwọ.
Pịa Save ozugbo ị nwere afọ ojuju na mgbanwe.
Wepụ oyiri n'Ụzọ si gị Library
Ozugbo gị iTunes na-synched na Wondershare TunesGo, ọ na-rummages na searches maka tracks gị ọbá akwụkwọ ndị chọrọ nlebara anya, a haziri ahazi ndepụta nke ndị dị otú ahụ egwu na-egosipụta na nri ebi ndụ nke interface.
Mgbe nke a mere, họrọ oyiri songs si ndepụta si Wondershare TunesGo panel-esi n'aka nri ebi ndụ nke interface.
Site egosipụta ndepụta nke oyiri faịlụ, kaa ndị na ị chọrọ ka ihichapụ.
Ozugbo i na-ahọrọ na-achọghị faịlụ, pịa Doro Anya All button ka ihichapụ niile oyiri tracks ke otu laa.
Idozi-efu Album ekpuchi
Pịa n'Ụzọ na-efu album cover nhọrọ si Wondershare TunesGo panel nke na-egosipụta na nri ngalaba nke interface.
Ozugbo ndepụta niile tracks enweghị a cover nkà na egosiri, ezi-na-akụ na egwu dị ka kwa gị mma.
Pịa Save bọtịnụ mgbe mere ịzọpụta mgbanwe.
Top 3 iTunes ndabere extractor na 2015
> Resource> iTunes> otú ndozi iTunes Library Easily na-akpaghị aka